कालिकोटको छाप्रेमा पहिरो, कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
कालिकोट, १० भदौ । जिल्लाको तिलागुफाल नगरपालिका वडा नं. ७ छाप्रेमा भीषण पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गएराति अबिरल बर्षासँगै गएको पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अन्गरगतको सुर्खेत जुम्ला सडकखण्ड पनि अबरुद्ध भएको हो ।
कर्णाली राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जुम्ला, मुगुबाट सुर्खेततर्फ र सुर्खेतबाट जुम्ला मुगुतर्फ जाने सवारी साधन तथा यात्रुहरु बीच बाटोमै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी गाउँमाथिबाट आएको पहिरो गाउँ पसेपछि स्थानीयको भागाभाग भएको थियो । पहिरोबाट तिलागुफा नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ८ का तीन वटा बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् । पहिरोका कारण छाप्रे, डाँडको बस्ती बिस्थापित भएको तिलागुफा नगरपालिका प्रमूख रतनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
शाहीका अनुसार पहिरोका कारण मानवीय क्षति भने भएको छैन । अहिले पहिरोग्रष्त क्षेत्रमा उद्धारका लागि जिल्लाका तीन वटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमूख डिएसपी श्यामबाबु ओलीयाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरीका डिएसपी दिलप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा सशष्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पहिरो स्थलमा खटिएको हो ।
लगातार गइरहेको पहिरोका कारण छाप्रेका २५ घरहरु तत्काल बिस्थापित हुने अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमूख डिएसपी श्यामबाबु ओलीयाले जानकारी दिए ।